ခင်မို့မို့အေးရဲ့မြေးမလေး ရုပ်ရှင်စရိုက်တဲ့နေ့မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြားအရာလေးတစ်ခုကိုဖွင့်ဟလာတဲ့ ကျော်သူ ⋆ The Ginger Media
ခင်မို့မို့အေးရဲ့မြေးမလေး ရုပ်ရှင်စရိုက်တဲ့နေ့မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ထူးထူးခြားခြားအရာလေးတစ်ခုကိုဖွင့်ဟလာတဲ့ ကျော်သူ
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. တစ်ခေတ်တစ်ခါကနေ အခုချိန်ထိ လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်ကျော်ကြားဆဲဖြစ်တဲ့ ပရဟိတမင်းသားကြီးကျော်သူကိုမသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနော်။
သူဟာ ကလေးတွေကော လူကြီးတွေကပါလေးစားအားပေးခြင်းခံရတဲ့သူလည်းဖြစ်သလို အနုပညာလောကအတွက်တကယ့်ကို စံထားရလောက်တဲ့မင်းသားတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။
အခုတစ်ခါ ရုပ်ရှင်လောကထဲကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ အရင်ကနဲ့မတူတဲ့ဖန်တီးမှုတွေ သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့အတူ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ထပ်မံရရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်နော်။
ကျော်သူဟာ အခုတစ်ခါမှာတော့ သရုပ်ဆောင်အပြင်ကို ကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးပုံဖော်လျက်ရှိပါတယ်နော်။
အခုတစ်ခါမှာလည်း အမှတ်တရပေါင်းများစွာနဲ့ ဒဏ္ဍာရီပင်လယ်ဆိုတဲ့ ရုံတင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးနေလျက်ရှိပါတယ်နော်။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းကလည်းဆန်းသလို အဖွဲ့သားတွေလည်း အရမ်းကိုပင်ပန်းပြီးကြိုးစားအားထုတ်ရတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ထူးထူးခြားခြားအနေ နဲ့ အကယ်ဒမီ ခင်မို့မို့အေးရဲ့မြေးမလေး “မိုးထက်က ကံ့ကော်ခင်” ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့ စစဦးချင်းသရုပ်ဆောင်တဲ့ရက်မှာပဲ နယ်ခံပရဟိတကလေးငယ်များက လာရောက်ဂါရဝပြုကန်တော့ခဲ့ကြပါတယ် လို့ ကျော်သူကဖွင့်ဟ ဆိုထားခဲ့ပြန်ပါတယ် ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….
ခဈြပရိတျသတျကွီးရေ…. တဈခတျေတဈခါကနေ အခုခြိနျထိ လြှမျးလြှမျးတောကျအောငျမွငျကြျောကွားဆဲဖွဈတဲ့ ပရဟိတမငျးသားကွီးကြျောသူကိုမသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနျော။
သူဟာ ကလေးတှကေော လူကွီးတှကေပါလေးစားအားပေးခွငျးခံရတဲ့သူလညျးဖွဈသလို အနုပညာလောကအတှကျတကယျ့ကို စံထားရလောကျတဲ့မငျးသားတဈလကျလညျးဖွဈပါတယျနျော။
အခုတဈခါ ရုပျရှငျလောကထဲကိုပွနျရောကျလာခဲ့တဲ့အခြိနျမှာတော့ အရငျကနဲ့မတူတဲ့ဖနျတီးမှုတှေ သရုပျဆောငျမှုတှနေဲ့အတူ ပရိတျသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှကေို ထပျမံရရှိခဲ့ပွနျပါတယျနျော။
ကြျောသူဟာ အခုတဈခါမှာတော့ သရုပျဆောငျအပွငျကို ကိုယျတိုငျဒါရိုကျတာလုပျပွီး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးပေါငျးမြားစှာကို ရိုကျကူးပုံဖျောလကျြရှိပါတယျနျော။
အခုတဈခါမှာလညျး အမှတျတရပေါငျးမြားစှာနဲ့ ဒဏ်ဍာရီပငျလယျဆိုတဲ့ ရုံတငျရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကို ရိုကျကူးနလေကျြရှိပါတယျနျော။ ဇာတျလမျးဇာတျညှနျးကလညျးဆနျးသလို အဖှဲ့သားတှလေညျး အရမျးကိုပငျပနျးပွီးကွိုးစားအားထုတျရတဲ့ဇာတျကားတဈကားပဲဖွဈပါတယျနျော။
ဒီဇာတျကားမှာတော့ ထူးထူးခွားခွားအနေ နဲ့ အကယျဒမီ ခငျမို့မို့အေးရဲ့မွေးမလေး “မိုးထကျက ကံ့ကျောခငျ” ပါဝငျရိုကျကူးခဲ့ပွီးတော့ စစဦးခငျြးသရုပျဆောငျတဲ့ရကျမှာပဲ နယျခံပရဟိတကလေးငယျမြားက လာရောကျဂါရဝပွုကနျတော့ခဲ့ကွပါတယျ လို့ ကြျောသူကဖှငျ့ဟ ဆိုထားခဲ့ပွနျပါတယျ ခဈြပရိတျသတျကွီးရေ….